Elu Elugo Downlight
Ọnụahịa ihe ọkụkụ na-ebili, ụlọ ọrụ ọkụ na-amalite ụgwọ ọnụahịa
site ha na 21-03-06
Glọ ọrụ Refeyim bulie ahịa ngwa ngwa, price mmụba anouncement nwere ike hụrụ n'ebe nile, ngwaọrụ ga-izute nnukwu ụkọ na afọ iri! Ndị ọrụ ụlọ ọrụ emeela ọkwa ọkwa nke mmụba ọnụahịa. Kedu ihe bụ uru na-erite uru na lighti ...
Kedu otu esi ahọrọ ala maka ụlọ nkwari akụ dị elu? Kedu ihe bụ okpu maka mkpuchi ihu ala?
site ha na 21-01-16
Hotelslọ oriri na nkwari akụ ise na-abụkarị okomoko, mana kedụ ndị bụ nzọ ahụ? N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ nkwari akụ na-emepụta Sleeper malitere onyinye nke a ghọtara dị ka oke dị arọ na ụlọ ọrụ imepụta - AHEAD Awards. N'ime ọrụ ndị edepụtara aha, ...
Ntughari ohuru ohuru: Ikanam Splicing Light (Splicing Panel Light)
. Ikanam Splicing Light Voltaji: 100-240V Mgbawa: RGBW, IP20 Dimmable na Agba mgbanwe Ọkpụkpụ mgbanwe, free splicing Echichi efu: Mgbidi mgbidi, Ugwu ịrị elu, Hungingmountin Ngwa: Ime ụlọ, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ oriri na ọ clubsụ ,ụ, klọb, ụlọ ngosi ihe ngosi Ngwa. ...
Tuya Smart eji na Simons ’Lighting
Dị ka ahịa ọkụ ọkụ mba ụwa na-aga n'ihu na-eto eto, nnabata nnabata nke sistemụ ọkụ ọkụ amamịghe aghọọla isi ọnọdụ na-enyere ọganiihu nke ahịa a aka. Ọ ghọọla ngwa ọkụ ọkụ ọhụụ kachasị ọhụrụ nke ga-eme ka uto nke L ...
Uru nke Tri-agba Light Belata nchekwa nke ọkụ. Maka onye na-ere ahịa, n'ùkwù, naanị ha kwesịrị ịchekwa ụdị ọkụ 1 na agba atọ iji zute ihe dị iche iche CCT chọrọ. Nke a nwere ike belata nrụgide ego ha na-akpata. Nsogbu nkịtị maka electri ...
Ọdịiche dị n'etiti Light Edge-lit na Back-lit Panel Light
Ọkụ ọkụ ọkụ LED aghọwo onye na-enyere aka na nchekwa ume na ngalaba ụlọ ọrụ. Mgbanwe gaa na ndozi ihe ntanetị sitere na troffers dabeere na fluorescent dị na ịrị elu ngwa ngwa. Ihe ndozi ndia di na ndi ozo di iche-iche na ndi Edge, ha abughi ihe di iche ...